Zimbaboe: Fihaonana tamin’ny mpitoraka bilaogy sy poety Zimbaboeana, Mcgini Nyoni · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Febroary 2011 16:43 GMT
Nanomboka nitoraka bilaogy aho tamin'ny Septambra 2009 taorian'ny fiofanana niarahako tamin'i Ivor Hartman tamin'ny fankalazana ny Intwasa. Mamelona ny bilaogy Storytime izy ary tao anatin'io fiofanana io dia nanokafany ny masonay tamin'ny fahafahanay manana vohikala maimaim-poana (ny bilaogy dia vohikala tokoa); zavatra izay tsy noeritreretinay ho azo tanterahana.
Ny bilaogy Ny poezy Bulawayo dia famoahana ireo poezy amin'ny aterineto ary ity no bilaogy ho resahiko manokana ato amin”ity fanadihadiana ity. Manoratra lahatsoratra fanehoan-kevitra ihany koa aho izay matetika mikasika ny olana eo amin'ny fitondrana ao amin'ny bilaogy Kubatana.
poetrybulawayo.blogspot.com dia mamoaka ireo poezy eran-tany ary ny zavatra nisongadina indrindra amin'izao dia ny antolojian'ny poezy DAYBREAK izay hita ao amin'ny UNIBOOK.
Ity ny iray amin'ireo poezian'i Mcgini antsoina hoe State Witness.